Izimpi Zesiphequluli: I-Internet Explorer iyaqhubeka nokulahlekelwa yiFirefox, Yini iSafari? | Martech Zone
NgoLwesine, Agasti 23, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Chofoza ishadi ukuze ulibone ligcwele. Iziphequluli ezimbili okufanele uzibheke yi-Internet Explorer neFirefox. Ukungena okuphelele kwe-Internet Explorer kuyehla kanti isabelo se-Internet Explorer 7 kubonakala ngathi siyahamba ngaphansi IFirefox!
ISafari ayikaze ibe nomthelela, noma ngabe izame ukungena ku-Windows market. Mhlawumbe ingxenye yezinkinga zeSafari yizinkinga zokuphepha ezisheshayo nezinamahloni ezavezwa kungakapheli amahora amabili ilandiwe nguLar Holm.
I-IMHO, inkinga nge-Internet Explorer ingenxa yezizathu ezimbili kuphela:
The Ithimba le-Internet Explorer ukuqhubeka nokungazi CSS amazinga. Noma kungazwakala sengathi lokhu kungaba yipesenti elincane labantu, ngabantu abangabaluleka kakhulu ukuthi bayabahlukanisa - onjiniyela.
Ngingazwakala sengathi ngiyayizonda i-Internet Explorer, kepha empeleni ngiyisebenzisa nsuku zonke. Kubonakala kusebenza kahle futhi, lapho kusetshenziswa ama-hacks wamakhasi, ukunikezwa kwalawa makhasi kuhle. Ngilwa njalo nokusebenziseka kohlelo lokusebenza, noma kunjalo, lapho nje ngizama ukusebenzisa imenyu. Ukuma okungenangqondo kwamamenyu kwesokudla kuyiphutha eliyisisekelo. Bheka noma yiluphi uhlelo lokusebenza futhi wonke amamenyu abekwe kwesobunxele, hhayi kwesokudla.
Ngisanda kulayisha iVista ku indodana yami, uBill, i-PC entsha ekhalayo futhi kufanele ngikutshele ukuthi i-interface iyamangaza, ikakhulukazi nge Imiphumela ye-Aero isebenza. UBill ukwazile ukufaka i-Office 2007 yesikole futhi ngiyayithanda i- iribhoni imenyu uhlelo. Kungangithatha isikhashana ukuthola ukuthi konke kukuphi - kepha kuze kube manje, isici ngasinye sime ngendlela enembile ngokubonwayo okumnandi okusimele ngokunembile isenzo.
Ngokunikezwa kwalezizithuthukisi zoMsebenzisi nokuSebenziseka kwemikhiqizo eyinhloko ye-Microsoft, kuyangimangaza ukuthi iqembu le-Internet Explorer alikhiphanga ucingo lokucela usizo.
Ungangilaleli, kepha… vele unake izibalo.
Aug 23, 2007 ngo-11: 14 PM
Yiziphi izibalo ezimelwe kumfanekiso wakho? Ingabe leyo yiwebhusayithi yakho? Isayithi lezibalo?
Aug 24, 2007 ku-12: 15 AM
Uyini umthombo wale datha?
Aug 24, 2007 ku-1: 13 AM
Ngisanda kufunda kumazwana weLifehacker ukuthi izibalo ze-w3schools azizinhle kangako ngoba zonke zigxile kubantu abakha i-web design - okuyizinga eliphakeme kakhulu lokutholwa kwe-firefox kunamanye amazwe.
Awukemba ngokwanele kuwo okwamanje.
I-Dean @ Itch Yezobuchwepheshe
Aug 24, 2007 ku-2: 59 AM
Ngizwile nawo lawo mazwana ngokuklanywa kwewebhu. Mina uqobo ngisebenzisa iFirefox yize kwesinye isikhathi i-IE ingenakugwenywa, ikakhulukazi lapho uqala ukusebenzisa eminye imikhiqizo esekwe kwi-Microsoft njenge-SharePoint.
Aug 24, 2007 ku-3: 32 AM
Siyabonga ngebhulogi yakho enhle.
Ngingathanda ukwazi ukuthi lezi zibalo zivelaphi ngoba iMozilla Foundation isanda kusho emasontweni ambalwa edlule ukuthi bayethemba ukuthi bazimisele ngo-30% ngo-2008 (ngoJuni).
Aug 24, 2007 ku-7: 45 AM
Lezi zibalo zivela ku- W3Schools. Uxolo bengingenakho lokho eposini! Ngivuselele okuthunyelwe ngakho namhlanje ekuseni.
Aug 24, 2007 ku-10: 38 AM
Kuze kube lezo zibalo ziqala ukufanisa iwebhu iyonke, empeleni azisho lukhulu. Ungahle nje ushicilele izibalo zeseva yakho.
Aug 24, 2007 ku-9: 41 AM
Kuyashaqisa ukubona leli shadi uma ucabanga ukuthi amasayithi amaningi ASAHAMBISANI neFirefox. Njengomsebenzisi wesikhathi eside weFirefox, lokhu kuyangihlanyisa.
Aug 24, 2007 ngo-6: 50 PM
Isikhathi eside IE6 hater b / c sokungalandelwa kwe-CSS, empeleni kuyangimangaza ukubona ukwehluleka kwe-IE7 ukubambelela, yize iMicrosoft yenze umsebenzi ohloniphekile ekuqinisekiseni ukuthi izimbungulu zesitayela zixazululiwe. Lokho, kuhlanganiswe neqiniso lokuthi i-IE7 ibizodudulelwa kubasebenzisi beWindows nge-Update, ungacabanga ukuthi i-IE6 ngabe yehle (futhi ngaleyo ndlela, yangena ukungena kwe-IE7) manje.
UChris Schmitt ubhale umbhalo omfishane omuhle ngomehluko kuziphequluli ezimbili ngombono wesitayela engiwubuyekezile kubhulogi lami lapha.
Aug 27, 2007 ngo-7: 31 PM
Uma unentshisekelo, ngingeze i- landela lokhu ngemiphumela ethize ephawulekayo ngokuya ngempendulo yomfundi.
Kuyathakazelisa ukuthi ukulahleka kwesabelo kwe-IE6 kuhumusha ngqo ekukhuleni kwamasheya kwe-IE7 .. kufanele sifunde lokhu okusho ukuthi ukukhula kweFirefox kuqhamuka kubasebenzisi bakudala be-IE? Lokhu kungokwemvelo ukuthi iFirefox ithole abasebenzisi abadala be-IE bagxume umkhumbi, kunabasebenzisi abathembekile kakhulu abaya kuyo yonke indlela yokuthuthukisa ye-IE4-5-6-7…